Al-shabaab iyo AMISOM oo ku dagaalamay Shabeelada hoose – Radio Daljir
Al-shabaab iyo AMISOM oo ku dagaalamay Shabeelada hoose
Febraayo 18, 2018 8:57 b 0
Ururka Al-shabaab iyo ciidamada AMISOM ayaa ku dagaalamay subaxnimadii hore maanta deegaanka Ababaay oo katirsan degmada Baraawe ee gobolka Shabeelada hoose.
Dadka deegaanka ayaa ku waramaya dagaalka inuu yimid ka dib markii ay Al-shabaab wadada ay u gashay ciidamada AMISOM oo halkaasi marayay.
Al-shabaab ayaa ku sheegatay dagaalka inay gaadiid AMISOM leeyahay ku gubtay, khasaarena ay u gaysteen.
AMISOM ayaan wali ka hadlin dagaalkan saakay ka dhacay deegaanka Ababaay ee katirsan degmada Baraawe.
Suuqa wayn ee Bakaaraha ee Muqdisho oo xiran